Fa ahoana mihitsy e ? Tsy nanaja fihibohana ireo zanaky ny Filoha
Niteraka adihevitra lehibe ny sary niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera facebook ny sabotsy lasa teo momba ny zanaka telo mianadahin’ny filoham-pirenena nandoko ny EPP teny Ambatobe sy namboly hazo teny an-toerana.
Ao anatin’ny fotoana fihibohana isika ankehitriny, ary ny filoham-pirenena no isan’ny tsy sasatra nanentana ny vahoaka Malagasy hanaja izany. Ny minisitry ny atitany Tianarivelo Razafimahefa sy ireo mpiditra an-tsehatra amin’ny haino aman-jery miara-manoja mila ho tataka ny vavany amin’ny fanentanana hoe: mijanona ao an-trano fa iray ny safidy dia na ianao ho velona na ianao ho faty. Ny zanaky ny Filoham-pirenena kosa mandeha mandoko trano, mamboly hazo, maka sary mifampitakosona tsy misy fanajana ilay iray metatra. Tsy sanatria fitia te hitsikera, fa io ilay hoe miainga avy any ambony foana ny ohatra. Ekena dia ekena tokoa hoe te hanao zavatra, te hanao asa soa, ary te haneho amin’ny vahoaka fa dieny kely dia mandray andraikitra ny zanaky ny Filoham-pirenena. Mifanaraka amin’ny zava-misy sy ny zavatra resahin’ny Filoha ve sa mametraka azy ho toy ny mpitari-bato vilam-bava ka hafa no lazain’ny vava ary hafa no tondroin’ny molotra? Zavatra tena maika tsy maintsy atao ve amin’izao vanim-potoana izao ny mandoko sekoly sy mikarakara zaridaina na mamboly hazo ?